बिबाह अघि जिवनसाथी छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु ! « गोर्खा आवाज
बिबाह अघि जिवनसाथी छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु !
बानी व्यवहार – कतिपय मानिसहरु को व्यवहार राम्रो हुदैन । जसले बैबाहिक जिवनमा असर पुर्‍याउछ । जाड रक्सी खाने, जुवा तास खेल्ने, पर पुरुष पर स्त्री संग रमाउने जस्ता नराम्रा बानी ब्यबहारले बैबाहिक जीवन कहिल्यै सुखमय हुदैन । आधुनिक युग संगै फैलिदै गएको छाडा संस्कृति का कारणले गर्दा झनै सजग हुनु आवस्यक छ । आफ्नो श्रीमान् श्रीमती भन्दा बाहेक बाहिर लागेर घरबार बिग्रीएका धेरै घटनाहरु छन् । त्यसैले बिबाह अघि नै एक अर्काको बानी व्यवहार बुझ्न आवस्यक छ ।
आयस्रोत- अहिले केटाकेटी दुवै कामकाजी हुन्छन् । नेपाली समाजमा अझै पनि केटीभन्दा केटा बढी पढेलेखेको तथा राम्रो जागिरे हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । आफ्नो सुरक्षित भविष्यका लागि हुने श्रीमान्/श्रीमतीको जागिर तथा पढाइ कस्तो छ बुझ्नु जरुरी छ । सरकारी तथा प्राइभेट कहाँ काम गर्ने हो त्यो पनि थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ ।
उमेरमा अन्तर – कतिपय अवस्थामा श्रीमान्–श्रीमतीको उमेरमा अन्तर हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई गम्भीर रूपमा लिइँदैन । कतिपयले यसलाई गम्भीर रूपमा पनि लिने गरेका छन् । कम्तीमा पनि ३ देखि ५ वर्षको अन्तर मान्य हुनुपर्छ । कतिपयको त १० वर्षको अन्तर पनि हुन्छ । केटाकेटीमा उमेरको अन्तर बढी नभए स्वभाव तथा आपसी तालमेल राम्रो हुन्छ । महिला तथा पुरुष शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु जरुरी हुन्छ ।
विवाह मनोरञ्जन होइन जिम्मेवारी – विवाह स्वच्छन्दता, यौन स्वतन्त्रता तथा मनोरञ्जनको लाइसेन्स मानिन्छ । यद्यपि एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ विवाह जिम्मेवारी हो । यसलाई जीवनको अन्त्यसम्म निर्वाह गर्नुपर्छ । विवाहको सात फेरोपछि जीवन वयस्क हुन्छ । यस्तो विन्दुमा पुगेपछि जीवनमा गम्भीरता आउँछ । त्यसैले विवाहलाई मनोरञ्जनका रूपमा होइन जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ ।
पारिवारिक सजगता – जीवनसाथीलाई जीवनभर साथ दिनु तथा साथ रहनुपर्छ । विवाहपछि जीवनसाथीको पारिवारिक संस्कार के छ, रीतिरिवाज के छ, सोच कस्तो छ सबै कुरा जान्नु जरुरी छ ।
जीवनसाथी कत्तिको स्वस्थ – विवाहजस्तो गम्भीर विषयमा भावी दम्पतीको स्वास्थ्य कस्तो छ ? जानकारी राख्नुपर्छ । विदेशतिर विवाहपूर्व रगत, एचआइभी तथा अन्य परीक्षण गराउने चलन पनि छ । यसो भए वैवाहिक जीवन निर्वाध रूपमा अघि बढ्छ र स्वस्थ वैवाहिक जीवन बिताउन सकिन्छ ।
जीवनशैली कस्तो छ ? – कतिपय मानिसमा धूम्रपान तथा मध्यपान गर्ने बानी हुन्छ । यस्तै अन्य कुराको पनि बानी हुन्छ । अरू महिलाका बारेमा के सोच्छ ? आफूभन्दा ठूलालाई इज्जत गर्छ कि गर्दैन ? आफ्नो करिअरप्रति कत्तिको गम्भीर छ ? भावी सन्ततिका बारेमा के सोच्छ ? यी सबै कुरा सुन्दा असहज लागे पनि यो गम्भीर विषय हो ।
समझदार छ कि छैन ? – विवाहपछि कतिपय श्रीमान्–श्रीमतीको पहिले गर्लफ्रेन्ड वा ब्वाईफ्रेन्ड भए ती कुरा बिर्सेर नयाँ जीवन सुमधुर ढंगमा अघि बढाउनुपर्छ । श्रीमान्ले श्रीमतीको रुचि तथा श्रीमतीले श्रीमान्को रुचि बुझेर अघि बढे जीवन सुखी हुन्छ ।
आफ्नो रुचिलाई बेवास्ता नगरौं – आफ्नो रुचिका कुराका लागि समय निकाल्नुपर्छ । चाहे त्यो पुस्तक पढ्न होस्, संगीत सुन्न अथवा नृत्य, पेन्टिङ आदि जे गर्दा खुसी प्राप्त हुन्छ, त्यो गर्नु राम्रो हुन्छ ।
हेल्थ चेकअप – विवाहपूर्व भावी दम्पतीले आ–आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनु राम्रो हुन्छ । यसबाट स्वास्थ्य प्रतिकूलताका बारेमा थाहा पाइन्छ र समयमै उपचार सम्भव हुन्छ । विवाहपूर्व नै उपचार गराए विवाहपछि समस्या भोग्नुपर्दैन ।
तुलना गर्ने बानी छोड्नुपर्छ – माइती पक्ष र श्रीमान्को घर परिवारबीच वातावरण, व्यवहार, सुविधा, सम्पन्नता आदिको तुलना गर्ने बानी ठीक होइन । यस्तै पुरुषले पनि आफ्नो घर र ससुराली बिच वातावरण, व्यवहार, सुविधा, सम्पन्नता आदिको तुलना गर्ने बानी ठीक होइन । यो बानीको सिकार भए दु:खबाहेक अरु केही हात पर्दैन । अत: यसलाई छोड्नुपर्छ, तुलना गर्नु हुँदैन ।